La Trilogie d'Exception muunganidzwa Léoville Las Cases - Palmer - Figea - Wevino.store
La Trilogie d'Exception muunganidzwa Léoville Las Cases - Palmer - Figeac
Chinyorwa chitsva, chakaganhurirwa "Trilogie d'Exception"nyaya inopemberera hushamwari pakati pemazita matatu akakosha muBordeaux kuburikidza nematatu akakosha ewaini. Chateaux Figeac, Leoville Las Mhosva uye Palmer kuratidzira nhoroondo yavo uye kuziva-kuburikidza neiyi yakanaka kesi yematanda, iyo inounza pamwechete kwete chete mawaini akasarudzika matatu, asiwo matatu anozivikanwa mavintages
Kutaura kwechokwadi kwekugona kwenzvimbo dzakakura idzi uye nehunhu hwusingaperi kumatunhu avo makuru, iyi kesi yakaburitswa muhuwandu hushoma, nemakopi 1,500 chete akaburitswa eyakajairika mabhodhoro vhezheni uye mazana matatu nemakumi matatu emakopi eiyo magnum bhodhoro vhezheni. Mhosva iyi inounza pamwechete yakakurisa Chateau Leoville Las Cases 330, Chateau Palmer 2000, uye Chateau Figeac 2005, ichipa tsananguro yakanaka yehunhu hwakagovaniswa nezvinhu zvitatu izvi: kwavo kuda, tsika uye tsika dzemhuri.
Imwe neimwe «La Trilogie d'Exception» kesi inosanganisira:
- 1 bhodhoro reChateau Leoville Las Cases 2000 kubva Chateau Leoville Las Mhosva.
Mamiriro ezvinhu akanaka emamiriro ekunze eiyo mazambiringa akatendera kukohwa kwemazambiringa akaenzana uye akanyatsobatikana. Mhedzisiro yacho iine velvety uye muchero waini. Chimiro chayo chakakwana chinosvika mukureba, unonwisa mvura.
- 1 bhodhoro reChateau Palmer 2005 kubva Chateau Palmer.
Kukohwa kwegore ra2005 kunofadza, kunyange kutorova. Zvirokwazvo hazvizokundikana, kunyangwe mushure memakumi emakore, kupa mufaro wakanyanya. Yakanyatsojeka, yakapfuma uye yakasimba, iyi waini inopa inowirirana mukanwa.
- 1 bhodhoro reChateau Figeac 2010 kubva Chateau Figeac.
Mwaka wegore ra2010 unogona kutsanangurwa seunoshamisa muBordeaux yakazara, uye kuChateau Figeac kunyanya. Yakashongedzwa uye yakaoma, waini iyi yakanyanyisa, asi izere nemuchenesa uye nehunhu hwakawanda. Iyi yepamusoro-kirabhu Premier Cru Classe.
Vanoda waini yakanaka uye vateresi vanokokwa ku (re-) tsvaga, kuburikidza neaya matatu akasiyana ma cuvees, iyo quintessence uye mweya wematatu makuru eBordeaux mareferensi.